Ubuntu 13.10 ကို Install ပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
Ubuntu 13.10 Saucy Salamander ကိုထည့်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
Ubuntu 13.10 Saucy Salamander ဖြစ်သည် နာရီစုံတွဲတစ်တွဲလွန်ခဲ့တဲ့အလင်းကိုမြင်တော်မူ၏။ ဒီရေပန်းစားတဲ့ distro တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်သလိုဒီမှာအချို့မှာ မင်းလုပ်သင့်တဲ့အရာ တစ် ဦး လုပ်ပြီးနောက် တပ်ဆင် ခြစ်ရာကနေ
sudo apt-get install gnome-session-flashback ကို install လုပ်ပါ
sudo add-apt-repository ppa: ricotz / စမ်းသပ်ခြင်း sudo add-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3 sudo add-apt-repository ppa: gnome3-team / gnome3-staging sudo apt-get update sudo apt-get install gnome -shell gnome-tweak-tool ကို gnome-shell-extension များ
Ubuntu 13.10 desktop လမ်းညွှန်ကိုသွားပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Ubuntu 13.10 Saucy Salamander ကိုထည့်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ Unity ကိုအခြားစားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများသို့ပြောင်း။ မရပါ။
ငါ KDE (Cinnamon လိုမျိုး) အတွက် ambiance နှင့် radiance themes များမည်သို့မှန်ကန်စွာထည့်သွင်းရမည်ဆိုသည့်သင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်မလားကြည့်ကြပါစို့။
စကားမစပ်, ငါ Gnome နှင့်အတူ Debian Jessie တွင် Ubuntu themes များကို သုံး၍ မရပါ (light-themes package package မှီခိုမှုများကိုတွေ့ရသည်) ။ gtk3 အပလီကေးရှင်းများသည်အလိုအလျောက်ပိတ်လိမ့်မည်၊ မည်သူကအဘယ်ကြောင့်သိသနည်း။
စိတ်ကူးမရှိပါ ငါ Debian Wheezy ကိုသုံးတာခက်တယ်။ သင်လိုချင်လျှင်၎င်းကိုတွေ့နိုင်သည် Debian ထံအပ်နှံထားသော site ပေါ်တွင်ဖိုရမ်ဖြစ်သည် သင်၏ပြproblemနာကို ပို၍ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာဆက်ဆံရန်။
ကောင်းပြီဟုတ်ကဲ့၊ နောက်မှရပ်လိုက်မယ်၊ မှတ်ချက်ပေးတာပိုကောင်းလိမ့်မယ်။
"gtype.c type id0မှာရှာဖွေခြင်းသည်မမှန်ကန်ပါ" နှင့်သင်၏အဖြေကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
sudo apt-get -f install သို့မဟုတ် sudo aptitude -f သည်ပျက်စီးနေသောမှီခိုမှုကို install လုပ်ရန်ထည့်သည်
အရာအားလုံးမလုပ်မီ ... အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာအချိန်ကိုသိမ်းဆည်းလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏တည်နေရာအတွက်အမြန်ဆုံးဆာဗာကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်သည် (များသောအားဖြင့်၎င်းသည် US ရှိအဓိက ubuntu ဆာဗာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရှိအဓိကဆာဗာသို့မဟုတ်၎င်းမဟုတ်သောအဓိကနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမြဲတမ်းမြန်တယ်)
ဒီလိုလုပ်ဖို့ဆော့ဗ်ဝဲရင်းမြစ် -> Ubuntu ဆော့ဗ်ဝဲ -> - «မှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်»ခေါင်းစဉ်မှာ - «အခြား .. »ကိုရွေးပြီး၊ ထို့နောက်«အကောင်းဆုံးဆာဗာကိုရွေးချယ်ပါ»မှာ။
ဤအရာသည်ဆာဗာများအားလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီးအမြန်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့သည်သိသိသာသာပိုမိုမြန်ဆန်လိမ့်မည်! (အထူးသဖြင့်လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများအတွက်အဓိကဆာဗာများပြည့်နှက်နေသောကြောင့်)
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်။
စကားမစပ်, Kubuntu ကို install ပြီးနောက်လုပ်ဖို့? «နီးပါးဘာမျှမ
KDE 4.11 အတွက် MuyLinux မှာလည်းအလားတူပဲ။ XD
Akonadi နှင့် Nepomuk တို့ကိုသင်အသုံးမပြုပါကပိတ်ထားပါ။
မဟုတ်ပါ။ KDE 4.11 ဖြင့် xD သင်သူတို့ရှိကြောင်းသူတို့သတိမထားမိပါ၊ သူတို့သည်အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီးအရာအားလုံးသည်အမွေးအတောင်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
Arch + KDE ကို install လုပ်တဲ့အခါငါသဘောပေါက်ခဲ့တယ်။
အနည်းဆုံးတော့ငါ့အတွက်၊ ငါ Akonadi (သာအသုံးပြုလျှင်နီပွန်မုက်ခ်) ကိုသာရပ်ဆိုင်းသည့်အခါသုံးစွဲမှုသည် ၄၇၀ မှ ၂၀၀ ကျော်ထက်အနည်းငယ်ပိုကျသွားသည်။
"gnome-session-fallback" သည်ဤနောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင်၎င်း၏အမည်ကိုပြောင်းလဲသွားကြောင်းသင်သိပါသလား။ အခု "gnome-session-flashback" wtf လို့ခေါ်တယ်။ ဟားဟား
ဒါကိုနည်းနည်းရယ်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ Ubuntu ကပဲ GNOME ကပြောင်းလဲလိုက်ပြီ။
Ubuntu ကို install လုပ်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောလမ်းညွှန်။ အရမ်းဆိုးတာငါ Ubuntu ကိုအချိန်အကြာကြီးမသုံးခဲ့ဘူး။ ယနေ့ကျွန်ုပ်၏အရာသည် Debian Xfce သို့မဟုတ် Manjaro Xfce သို့မဟုတ် OpenSUSE, သို့မဟုတ် Chakra ဖြစ်သည်။ သို့သော်သူနှင့်အလွန်တော်တဲ့သူတစ်ယောက်ရှိလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မှားခဲ့လျှင်၎င်း Ubuntu သည် ၉ လအထိသာအထောက်အပံ့ရလိမ့်မည်။
Xorg edgers ati drivers တွေကအရမ်းဟောင်းနေတယ်၊ ​​ငါမမှားရင် 13.8 ပေါ့! , ppa အတော်လေးသေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်တော်မူပြီ ငါကားမောင်းသူ debs ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖန်တီးသူတို့ကို install လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
အထူးသဖြင့်စတင်ခါစသူများအတွက် "အလားအလာရှိသော" အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာတွေ့ခြင်းသည်ကောင်းပေသည်။ သင့်မှာရှိခဲ့ရင်ငါ့ဆီကိုပို့လိုက်ပါ။ ငါပို့စ်ကိုပြင်မယ်။ 🙂
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ရှိအစီအစဉ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်။
သို့မဟုတ် Arch repos packages များကို .deb နှင့်ပြောင်းပါ ဂြိုလ်သား ubuntueros ပိုပြီးမခံစားရစေဖို့သူတို့ကိုပေးလိုက်ပါ။
-Install လုပ်ပါ xubuntu- ကန့်သတ် - extras.
Xubuntu ကိုသုံးပြီးပိုမိုရိုးရာ desktop ကိုလိုချင်သူများအတွက်:
- Configuration Management » Panel ရှိအောက်ပိုင်း panel ကိုဖယ်ရှားပါ။ ၎င်းကိုညာဖက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းရွေးစရာကိုသင်ရနိုင်သည်။
အောက်ပါ ppa ထည့်ခြင်းဖြင့် Whisker menu ကိုထည့်ပါ။
... ထို့နောက်နှင့်အတူ update လုပ် sudo apt-get-update ကို စာရိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းကိုထည့်သွင်းပါ sudo apt-get ကို install လုပ်ပါ xfce4-whiskermenu-plugin
- ၎င်းတို့ကို panel ၏တူညီသောဖွဲ့စည်းမှုတွင်ထည့်ပါ။
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်ဒီအချိန်မှာ Ubuntu နည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတယ်။ ငါသိပ်မထည့်သင့်ဘူး၊ အနည်းဆုံးငါ့ရဲ့ pc က startup and shutdown အပြောင်းအလဲကိုမြင်တယ်။ unity ကဒီ ၁၃.၁၀ ဗားရှင်းမှာနည်းနည်းပိုမြန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဗားရှင်းတစ်ခုစီကအားနည်းချက်တွေနဲ့ပြproblemsနာတွေရှိတယ်။ ၊ အချို့သော package များကိုခေတ်မမီတော့ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီး၊ မှီခိုမှုများတွင်အထူးသဖြင့် ia13.10-libs စာကြည့်တိုက်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်တပ်ဆင်လိုပါကအမှားအယွင်းရှိသည်။
Ubuntu သည်ကျွန်ုပ်၏ pc တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၁၃.၀၄ ကတည်းကဖြစ်ပျက်သည်၊ ဆင်းပါ၊ ၁၃.၁၀ ကြိုးစားပါ၊ သင်ပြproblemနာရှိနေသည်ကိုသတိပြုပါ ...
၁၁.၄၄ မှ ၁၃.၄.၄၀ သို့အစဉ်မပြတ်တပ်ဆင်ခဲ့သောလက်ပ်တော့ပ်တွင် live start ပြီးနောက် ၁၃.၁၀ ကို install လုပ်ပြီး splash ကိုပြသခြင်းအားဖြင့် screen သည်အနက်ရောင်ဖြစ်လာပြီးဘာမှမလုပ်ပါ။ graphical environment နှင့် disk မရှိပါ။ လှုပ်ရှားမှုမြင်ကြပြီ ငါ beta နှင့် beta RC တပ်ဆင်လိုသော အချိန်မှစ၍ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ၁၃.၀၄ မှ update ပြုလုပ်ရန်အတွက်၎င်းဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သော်လည်း၎င်းမစပါက Fedora, Rosa, Pear နှင့်ကြိုးစားပြီး၎င်းကိုပြproblemနာမရှိဘဲထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် Kubuntu 11.04 နဲ့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူး။
ငါသူ့ညွှန်ကြားချက်ကိုစာကိုလိုက်နာလိုက်တယ်၊ ၀ င်လိုက်တာနဲ့ ... ငါ့ system thunded၊ သူဘယ်တော့မှမဝင်ဘူး ... တခြားသူနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တာလား
ငါသည်လည်း Kubuntu 13.04 ကို install လုပ်ပြီးနောက် 13.10 သို့ update လုပ်သောအခါ၊ ၎င်းသည်စတင်ခဲ့သော်လည်း 13.10 ၏သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုကိုငါပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်မျက်နှာပြင်မှာလုံးဝမည်းနေ၏။ ငါ kernel4နှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့ကြောင်း Mageia3alpha 3.12 ကို install လုပ်ဖို့ရှိသည်
သင်ပိုပြီးတိကျတဲ့ဖြစ်နိုင်မလား ?? သင်ဘာလုပ်ခဲ့ပါလဲ?
getdeb နှင့် playdeb ရပ်စဲခံရဖို့ထင်မဟုတ်ခဲ့ ???
Raul Sierra သို့ပြန်သွားပါ
အယ်လ်ပက်ကက် စည်းလုံးမှု - မှန်ဘီလူး - စျေးဝယ် အခုခေါ်ပြီ စည်းလုံးညီညွတ်မှု - နယ်ပယ် - အိမ်မှာ
ဒါကြောင့် သငျသညျ dash ရှင်းလင်းဖို့သင်တင်ပေးပါ command ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး, Ubuntu 13.10 တွင်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းမှာဤ command ဖြင့်ဖြစ်သည်။
$ gsettings သည် com.canonical.Unity.Lenses မသန်မစွမ်းသောနေရာများ "['more_suggestions-amazon.scope']"
$ gsettings မှ com.canonical.Unity.Lenses မသန်မစွမ်းသောနေရာများ - ['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions- ebay.scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' more_suggestions-skimlinks.scope '] »
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ 🙂
ဘာလုပ်မလဲ ကောင်းပြီ၊ အရင်ပုံစံကို format လုပ်ပါ။
- nvidia driver ကိုလက်ဖြင့်မသွင်းနိုင်ပါ။
- Nautilus သည်ညှပ်ခြင်းဖြင့်အမြဲတမ်းတွယ်ကပ်နေပြီးကျွန်ုပ်အားလျှို့ဝှက်ဖိုင်များအမြဲတမ်းပြသည်။
- Totem သည်မည်သည့် plugin ကိုမှတပ်ဆင်။ မရပါ။
- google chrome မှ combobox ကိုဖွင့်သောအခါ၊ တစ်ခါတစ်ရံအခြား site တစ်ခုတွင်ပေါ်လိမ့်မည်။
- Kazam နှင့် avconv အလုပ်မလုပ်ပါ
အနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ် -> http://www.youtube.com/watch?v=g-WbWXvmfWg
ယောက်ျားတွေ၊ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လလောက်ကငါတီဗီကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ တစ်နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက်ငါ Debian ကနေထွက်ခွာလာတဲ့ hdmi နဲ့ Ubuntu Gnome 13.04 ကိုထည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
ငါထပ်တူကျတဲ့နေ့ကို ၁၃.၁၀ အထိတိုးမြှင့်ခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မဆန့်ချင်ပါ၊ မကြာသေးမီကဖြန့်ချိပြီး Ubuntu ကို install လုပ်ခြင်းသည်အဓိကခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်နှင့်အကြံပေးချက်သည်တစ်စုံတစ် ဦး အတွက်အသုံးဝင်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်းတစ်ခုစီအတွက်အထောက်အကူပြုအချိန်အားလုံးကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လူအများထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်ဆန့်ကျင်သည် ၆ လမဟုတ်ဘဲ ၉ လဖြစ်သည်။ ငါ ၁၃.၀၄ ရက်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလတိုင်အောင် format ပြန်ပြီးတပ်ဆင်လိုက်ပြီ။ အခု Ubuntu Gnome6အကြောင်းဘာမှမသိချင်ဘူး၊9မှာ ass လိုပဲ။
မင်္ဂလာပါ compis ။
အလွန်ကောင်းတာကဂရုစိုက်စရာကောင်းပေမယ့် X server ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိနိုင်တာကကျွန်တော့်ကဒ်ဟာ ATI Raedon X1200 ဖြစ်ပြီးအခြိနျမှနျမှအလုပျခကျခဲတယျ။ မင်းငါ့ကိုကူညီမယ်ဆိုရင်ငါဘယ် version ကိုငါလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာငါတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
ပြီးတော့ USB wi-fi adapter အတွက် ndiswrapper (သို့) linux drivers တွေကိုကျွန်တော် download လုပ်လို့မရသေးဘူး။ ဒီဗားရှင်းမှာပြwithနာရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုမှသိမှာမဟုတ်ဘူး။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အသုံးဝင်သည်၊ အထူးသဖြင့် Codec တပ်ဆင်ခြင်း။
Ubuntu ps distro အသစ်တစ်ခုကိုသူတို့ကြိုးစားတိုင်းတိုင်းထူးကဲသောပါဝင်မှု menu၊
Mayorga Barrera ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာရှိနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ပေါင်းစည်းထားသောကွန်ယက်ကဒ်မအောင်မြင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ENL832-TX-ICNT PCI ကွန်ယက်ကဒ်ကိုတပ်ဆင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင်ယာဉ်မောင်းများမရှိပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ Ubuntu 12.04 ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Mayorga Barrera အားပြန်ကြားပါ
andrea ဆ။ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါကောင်းသောနေ့ပါ။ Ubuntu ၁၃.၁၀ တွင်ကျွန်ုပ်သည်စကားဝှက်ကိုရေးနေပြီး၎င်းသည်မှားယွင်းကြောင်းဖော်ပြသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ terminal တွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းပါက၊ ကျွန်ုပ်သုံးစွဲသူစကားဝှက်ကိုရိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသည်။ ! ကျေးဇူးပြုပြီးပုံမှန်လက်စွပ်အပ်ငွေတွင်မပါပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး !!! ကူညီပါ!!!!
andrea g အားစာပြန်ပါ။
သူတို့ဟာမတူညီတဲ့သော့ ၂ ခုပါ။ 🙂
စီးပွားဖြစ်သို့မဟုတ်အခမဲ့ယာဉ်မောင်းများကိုအသုံးပြုရန်သင်အကြံပြုသော Radeon HD 7850 ကဒ်ရှိပါသလား။
ပို့စ်အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ အရမ်းပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိပုံရတယ်၊ ငါ install လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ငါလိုက်နာပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Borja HA ဟုသူကပြောသည်
Borja HA အားပြန်ပြောပါ
ရပါတယ်! ပွေ့ဖက်! ရှင်ပေါလု။
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ အရမ်းကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာ၊ fglrx-legacy ကို repository ၏စာရေးသူအဆိုအရ version 12.10 အထိသဟဇာတဖြစ်အောင်ပေါင်းထည့်ပါ။
ငါဒီမှာ s / linux သင်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါ၏။ သင်ပထမ ဦး ဆုံး "terminal" ဒီအကြောင်းပြောခဲ့တယ်၊ ငါဘယ်ကိုရလဲ၊ မဝယ်၊ ရှာသည်။ အဲ့ဒီအချိန်အထိငါရပ်လိုက်တယ်။ ငါပျင်းရိခြင်းသို့မဟုတ်မိုက်မဲသောကြောင့်, ငါမသိရပါဘူး။
ငါလက်ခံတယ် အသေးစိတ်ရှင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ ဤနှင့်အခြားတူညီသော / အလားတူနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းအဘို့, ၎င်းသည် GNU / LINUX သို့ပြောင်းလဲ (နောက်ကျော) သောသူများအတွက်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။
မျက်နှာပြင်အပြည့်နှင့် Chrome ရှိပြနာများ? ဒီမှာဖြေရှင်းချက်